March 7, 2021 Xuseen 2
Soomaaliya ayaa si sii kordheysa uga walaacsan jiheyn cusub oo ka timid maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka, taasi oo ku aadan isticmaalka diyaaradaha drone-ka iyo duqeymaha ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya.
Saraakiisha Soomaaliya ayaa isbeddeladan u arka kuwa kooxda Al-Qacida ku xiran ee markii horeba dhiiri-gelinta haysata siin kara fursado badan oo ay ku holw-gasho, tan iyo markii Joe Biden noqday madaxweynaha Mareykanka 20-kii Janaayo, dowladda Mareykanka ayaan wax duqeymo ah la beegsan Al-Shabaab, kadib toddoba duqeyn oo ay fulisay 1-dii illaa 19-kii Janaayo ee sanadka 2021.
Dalkiina, Soomaaliyeey idinkaa feel kuridey, idinka meceyshadii daruuriga ahey isku qaaliyeeyey inaad dhexdiina iska baayac mushtartaan. Idinkaa dalkiinii siiyeeyey shishweye o waxaad buunbuynisaan aduynyada kale iney wax idiom yeeryaan. Kama shaqeysaan mustaqbalkiina waxaad isaga dayataan xumaanta. Waxaad isku sheegtaan wariyayaal wax aad qorysaan waa copy.
Hadii ciidankii loogu tala galay, in ay la diriraan argagixiso, xamar dariiqyadeeda la taagey , iyo madaxtooyada, yaa la diriraya argagixiso ? waa cidna, waxaa farmaajio isagaa la shaqeeya ragaan.